အကျရျှလယေနျးကို နှဈကွိမျတိုငျအရှကျရအောငျလုပျပွီးမှ သှငျးယူသှားတဲ့ ဒီဘားလားရဲ့သှငျးဂိုး
March 9, 2020 phyo News, Serie A 0
၈နှဈဆကျစီးရီးအခေနျြပီယံဂြူဗငျတပျဈဟာ ယမနျနညေ့က ခနျြပီယံလုဘကျ အငျတာမီလနျကို ဧညျ့ခံကစားခဲ့ရပွီး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအန်တရာယျကွောငျ့ ပရိသတျမပါဘဲ တံခါးပိတျကငျြးပခဲ့ရပါတယျ။
ဒီလိုအိမျကှငျးမှာ ပရိသတျမပါဘဲ ကငျြးပခဲ့ရပမေယျ့ ဂြူဗငျတပျဈကတော့ အကောငျးဆုံးခွစှေမျးပွသနိုငျခဲ့ပွီး နညျးပွကှနျတီရဲ့အသငျးကို ၂-၀ ဂိုးနဲ့အနိုငျယူကာ အမှတျပေးဇယားကို ပွနျလညျဦးဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အာဆငျနယျကွယျပှငျ့ဟောငျး ရမျဆေးက သူ့အပျေါ ဝဖေနျနမှေုတှကေို တိတျဆိတျသှားအောငျ လုပျဆောငျတဲ့အနနေဲ့ အရေးပါတဲ့ ဦးဆောငျဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့သလို ဒီဘားလားရဲ့ဂိုးကိုလညျး ဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဒုတိယမွောကျဂိုးကတော့ ဒီဘားလားရဲ့ခွအေနှုတျအသိမျးကောငျးမှနျမှုက ပိုမိုထငျရှားပျေါလှငျခဲ့ပွီး အငျတာမီလနျကစားသမားသဈ အကျရျှလယေနျးကို နှဈကွိမျတိုငျတိုငျ အရှကျတကှဲဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။
ပထမအကွိမျကတော့ အာဂငျြတီးနားလကျရှေးစငျ ဒီဘားလားဟာ ကိုကျ ၆၀ အကှာကနေ ပေးပို့မှုကို ဘယျခွနေဲ့ အသာထိနျးကာ သူ့နောကျ ကပျလိုကျလာတဲ့ အကျရျှလယေနျးလညျး အရှိနျမထိနျးနိုငျဘဲ ဘောလုံးနဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျဖွဈခဲ့ရပါတယျ။
အဲဒီနောကျ ဒီဘားလားဟာ စညျးထိပျမှာရှိတဲ့ ရမျဆေးနဲ့ အပေးအယူလုပျကာ ပငျနယျတီဧရိယာထဲ ထိုးဖောကျလာပွီး ရမျဆေးရဲ့ပေးပို့မှုကနေ သူ့နောကျတဈကောကျကောကျလိုကျကပျနတေဲ့ အကျရျှလယေနျးကို ဘယျခွနေဲ့ တဈခကျြခွယေောငျပွလိုကျတော့ ယူနိုကျတကျအသငျးခေါငျးဆောငျဟောငျးလညျး အရှိနျမထိနျးနိုငျဘဲ ဒီဘားလားရဲ့ကနျသှငျးမှုကို ဒီအတိုငျးငေးကွညျ့နရေုံပဲ တတျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
El mejor gol del fin de semana? El mejor gol del fin de semana.
Golazo de #Dybala que le dio el triunfo al #Juventus frente al #Inter. pic.twitter.com/lZcO9XSuJA
— Apostala (@Apostalapy) March 9, 2020
အဲဒီသှငျးဂိုးက မာရာဒိုနာနဲ့ မကျဆီ နှဈပေါငျးထားတဲ့ဂိုးလို့တောငျ ပရိသတျတှကေ ခြီးကြူးနကွေပွီး ဒီဘားလားအနနေဲ့ ဒီပုံစံအတိုငျး ခွစှေမျးကို ဆကျထိနျးနိုငျဖို့ လိုအပျနပေါတယျ။ သူဟာ ဒီရာသီစီးရီးအမှော ၂၄ပှဲကစားခှငျ့ရထားပမေယျ့ ဂိုးကတော့ ၇ဂိုးပဲ သှငျးယူထားနိုငျပါတယျ။
@PauDybala_JR @juventusfc pic.twitter.com/QC03v2GANy
— DYBALA (@BUTSHA21) March 9, 2020
အက်ရ်ှလေယန်းကို နှစ်ကြိမ်တိုင်အရှက်ရအောင်လုပ်ပြီးမှ သွင်းယူသွားတဲ့ ဒီဘားလားရဲ့သွင်းဂိုး
၈နှစ်ဆက်စီးရီးအေချန်ပီယံဂျူဗင်တပ်စ်ဟာ ယမန်နေ့ညက ချန်ပီယံလုဘက် အင်တာမီလန်ကို ဧည့်ခံကစားခဲ့ရပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကြောင့် ပရိသတ်မပါဘဲ တံခါးပိတ်ကျင်းပခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလိုအိမ်ကွင်းမှာ ပရိသတ်မပါဘဲ ကျင်းပခဲ့ရပေမယ့် ဂျူဗင်တပ်စ်ကတော့ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့ပြီး နည်းပြကွန်တီရဲ့အသင်းကို ၂-၀ ဂိုးနဲ့အနိုင်ယူကာ အမှတ်ပေးဇယားကို ပြန်လည်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အာဆင်နယ်ကြယ်ပွင့်ဟောင်း ရမ်ဆေးက သူ့အပေါ် ဝေဖန်နေမှုတွေကို တိတ်ဆိတ်သွားအောင် လုပ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ အရေးပါတဲ့ ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သလို ဒီဘားလားရဲ့ဂိုးကိုလည်း ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒုတိယမြောက်ဂိုးကတော့ ဒီဘားလားရဲ့ခြေအနှုတ်အသိမ်းကောင်းမွန်မှုက ပိုမိုထင်ရှားပေါ်လွင်ခဲ့ပြီး အင်တာမီလန်ကစားသမားသစ် အက်ရ်ှလေယန်းကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် အရှက်တကွဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ပထမအကြိမ်ကတော့ အာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင် ဒီဘားလားဟာ ကိုက် ၆၀ အကွာကနေ ပေးပို့မှုကို ဘယ်ခြေနဲ့ အသာထိန်းကာ သူ့နောက် ကပ်လိုက်လာတဲ့ အက်ရ်ှလေယန်းလည်း အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ဘောလုံးနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီနောက် ဒီဘားလားဟာ စည်းထိပ်မှာရှိတဲ့ ရမ်ဆေးနဲ့ အပေးအယူလုပ်ကာ ပင်နယ်တီဧရိယာထဲ ထိုးဖောက်လာပြီး ရမ်ဆေးရဲ့ပေးပို့မှုကနေ သူ့နောက်တစ်ကောက်ကောက်လိုက်ကပ်နေတဲ့ အက်ရ်ှလေယန်းကို ဘယ်ခြေနဲ့ တစ်ချက်ခြေယောင်ပြလိုက်တော့ ယူနိုက်တက်အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းလည်း အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ဒီဘားလားရဲ့ကန်သွင်းမှုကို ဒီအတိုင်းငေးကြည့်နေရုံပဲ တတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီသွင်းဂိုးက မာရာဒိုနာနဲ့ မက်ဆီ နှစ်ပေါင်းထားတဲ့ဂိုးလို့တောင် ပရိသတ်တွေက ချီးကျူးနေကြပြီး ဒီဘားလားအနေနဲ့ ဒီပုံစံအတိုင်း ခြေစွမ်းကို ဆက်ထိန်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ သူဟာ ဒီရာသီစီးရီးအေမှာ ၂၄ပွဲကစားခွင့်ရထားပေမယ့် ဂိုးကတော့ ၇ဂိုးပဲ သွင်းယူထားနိုင်ပါတယ်။
အသငျးရဲ့ရှုံးနိမျ့မှုအတှကျ သူ့မှာဘဲတာဝနျရှိတယျလို့ ဇီဒနျးဝနျခံ
ဖရီးကဈရဖို့ ဖာနနျဒကျဈ ဒိုငျဗငျထိုးခဲ့တယျလို့ စီးတီးကှငျးလယျလူ ဂနျဒိုဂနျ စှပျစှဲ